Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Amerika Latina tamin’ny Febroary 2015
Amerika Latina · Febroary, 2015
Tantara mikasika ny Amerika Latina tamin'ny Febroary, 2015
15 Febroary 2015
Endrika Toy Inona No Ahitan'Ireo Tantsaha Mpila Ravinahitra Ny Lalantsara Fivarotam-bokatr'ireo Toeram-pivarotana Goavana Amerikana
Mpanoratra PRI/PRX's The World · Amerika Avaratra
Ahoana ny fioty voatabia raha miohatra amin'ny tongolobe? Ary mba ahoana ny amin'ny frezy? Meksikana iray, tantsaha mpila ravinahitra monina any Central Valley ao California no manazava ny zavatra hitany tao aminà toeram-pivarotana lehibe iray.
Mpanoratra J. Tadeo · Meksika
09 Febroary 2015
Ny Fomba Fiaina Munduruk, Tandindonin-doza Noho Ny Asa Fanorenana Tohodrano Ao Brezila
Mpanoratra Pública - Agência de jornalismo investigativo · Brezila
Ampahany faharoa amin'ny firesahan'ny Agência Pública momba ny vahoaka ao Sawré Muybu, faitra iray hoakotry ny rano ao Brezila raha miroso ihany ny asa fanamboarana tohodrano hakàna herinaratra.
05 Febroary 2015
Manampahaizana Momba Ny Politika Etazonia-Kiobà: Miresaka Ny “Fahasamihafàna Lalina” Eo Amin'ny Zon'Olombelona
Mpanoratra Elaine Díaz · Karaiba
Ilaina ampidirina amin'ny adihevitra momba ny zon'olombelona ao Kiobà ny famerenany mandinika lalina ny drafitra demaokrasia ao amin'ity firenena ity.
Mpanoratra Gabriela Garcia Calderon Orbe · Kolombia
Mampiady hevitra ilay fifaninanana hatsaran-tarehy fantatra amin'ny "Oliravin'ny Tako-kenatra hoan'ny Kely," izay tohanan'ny fiadidian'ny tanàna, ahitana zazavavy kely zara fa enina taona tsy manao afa-tsy silipo.
Mpanoratra Belén Quezada · Ekoatora
Tsy Nahafaly Loatra ny Kolombiana Ny Fiakarana Kelin'ny Karama Ambany Indrindra
Mpanoratra Cati Restrepo · Kolombia
Nampiakarin'ny governemanta Kolombiana 4,6 isan-jato ho 644 350 pesos Kolombiana ($273) ny karama farany indrindra horaisin'ny amin'ny taona 2015 araka ny nambara tamin'ny 30 Desambra 2014.